Bull shark: Ibhayoloji, iimpawu, indawo yokuhlala kunye nokuzala | Ngeentlanzi
Kumanqaku angaphambili besithetha ngawo Ukrebe omhlophe njengomnye wezilwanyana ezinoburhalarhume elwandle. Namhlanje siza kukuxelela enye ngookrebe. Kule meko siza kuthetha ngayo inkunzi ukrebe. Nangona umgaqo eli lingavakali liqhelekile, yenye yezona shark zixhaphake kakhulu ezihlala kunxweme nakwiilwandle zeLatin America. Igama layo lenzululwazi ngu ICarcharhinus leucas.
Ukuba ufuna ukwazi zonke iimpawu, ukondla, indawo yokuhlala kunye nokuzala kwakhona kwale shark, le yiposti yakho.
2 Ukuhanjiswa kunye nendawo yokuhlala
3 Ukutya kwe-Bull shark
4 Ukuzala kunye nenzala
5 Udidi lwesoyikiso
Kukho iindawo ezininzi zokubona le krebe kwiindawo ezininzi. Kulula kakhulu ukuhambahamba elwandle kwaye zininzi kakhulu. Ungahamba emanzini amatsha anetyuwa kunye nemilambo kunye namachibi akuMbindi Merika naseAmazon.
Umzimba wayo unamaphiko amabini amakhulu emqolo kunye nomsila omde onomqolo omde ongaphezulu kunye ne-precaudal bill. Unokufumana iikopi ze ukuya kuthi ga kwi-3,2 yeemitha ubude. Ngokomndilili amadoda alinganisa i-2,1 yeemitha kwaye amabhinqa ayi-2,2 yeemitha. Azihluki ngobukhulu. Umbala wayo ungwevu emzimbeni wonke, ngaphandle kwenxalenye ephezulu emhlophe.
Luhlobo lwaselwandle olunolwazelelelo kwaye luthathelwa ingqalelo phakathi kwezona ntlobo zinkulu zookrebe. Ubunzima bakho oscillates phakathi kwama-90 nama-200 eekhilogram. Ezona zinzima zihlala zinde. Nangona abantu bekholelwa ukuba ukrebe omhlophe sesona silwanyana siyingozi elwandle, ayichanekanga. I-bark shark inokuba lula ngakumbi ekuhlaseleni abantu.
Umzimba wayo womelele kwaye ungqingqwa, kunye namaphiko amade. Xa zisencinci zinamabala amnyama namabala abomvu emacaleni. Ngokuphathelele kumazinyo (into ebalulekileyo kwihlabathi lookrebe) sifumana ubukhulu obukhulu, bukhali kwaye bude. Imihlathi yomelele kakhulu, nangona amehlo ayo emancinci kakhulu xa kuthelekiswa nomzimba wayo uphela.
Ihlala ibonisa umsebenzi omkhulu wokuhlasela kunye nokuziphatha okuhlaselayo. Xa zihlasela, zikwenza oko ngokujikeleza amaxhoba azo izihlandlo ngezihlandlo. Baya kuba njalo de bafezekise iinjongo zabo. Atyekele ekuhlaseleni abantu, ke ulumkiso olukhulu kufuneka lwenziwe kunye nabo.
I-bull shark inokufumaneka kuMlambo iAmazon eMzantsi Melika, iZambezi (yiyo loo nto ikwabizwa ngokuba yi Zambezi shark) kunye ne Limpopo eAfrika, kwi Lake Lake Cocibolca eNicaragua kunye nase Ganges e India.
Ngokubhekisele kwindawo ezihlala kuyo, ezi zilwanyana ziyakuthanda ukuhambahamba iindawo apho bakufutshane namanxweme okanye amanxweme. Ngale ndlela, banokufumana inani elikhulu lamaxhoba okondla kuwo. Ookrebe bafumaneka kuzo zonke iindawo eziselunxwemeni kwihlabathi liphela, hayi eMzantsi Melika kuphela, kodwa nakwiPacific, Atlantic naseIndiya Ocean.
Zizilwanyana ezo, ngokubanzi, zihlala zihlala kwindawo efanayo ukusuka ekuzalweni ukuya ekufeni. Nangona kunjalo, kunokuba kunjalo ukuba bafudukela kumgama omde. Iimpawu ziye zabonwa kwiindawo zemilambo kunye namachibi apho, ukufika, kuye kwafuneka bahambe malunga neekhilomitha ezingama-3000 XNUMX ukunyuka.
Ukutya kwe-Bull shark
Inkunzi krebe itya zonke iintlobo zezilwanyana. Obo bunjalo ububanzi ekutyeni abanako ukutya abanye ookrebe. SUkutya kukutya ngokupheleleyo. Ziyingozi ebantwini, kuba indawo abazingela kuyo isondele kakhulu kwiindawo zokudada.
Ukukwazi kwabo ukungena emanzini amatsha emva kokuba bevela kwityuwa kungenxa yedlala ekhethekileyo kwizintso. Le ndlala ibavumela ukuba bagcine amanzi anetyuwa emzimbeni wabo kwaye bawakhuphe amanzi amatsha. Oku kwezinye iintlobo zookrebe kungabulala. Amanzi amatsha abangela ukuba iiseli zikakrebe ezihlala emanzini aselwandle ziqhume kwaye zikhokelele ekufeni. Ndiyabulela kule ndlala, i-bark shark ingasondela kwiindawo zabantu.
Ukuzala kunye nenzala
Le krebe yaziwa ngokuba yenye yezilwanyana ezinelona zinga liphezulu le testosterone ngexesha lokukhwelana. Unako ngaphezulu kwale hormone kunendlovu yendoda yaseAfrika. Ngexesha lokukhwelana lonyuka nangakumbi, elenza ukuba libe sisilwanyana esithanda indawo kakhulu.
Ukuveliswa kwakhona kwe-bull shark kuyafana ngokufanayo nezinye izilwanyana ezincancisayo. Nangona kunjalo, inophawu olwahluke kakhulu kolwezinye iintlobo. Kungenxa yokuba abantu ababhinqileyo banezibilini ezimbini. Oku kwaziwa njenge-intrauterine cannibalism.
Iimbumba ezincinci ezikhulayo ngaphakathi kubo zinakho ukondla abantwana babo ukuba imeko iyasilela kwizakhamzimba. Ukumitha kwabaselula kuhlala phakathi kweenyanga ezisi-8 ukuya kwezi-10. Eli xesha liyimfuneko kwinzala ukuba ikhule kakuhle kwaye ikwazi ukuzimela bakuba bemkile kunina.
Abafazi banakho kuphela ukuzala abantwana ngamaxesha amabini kwaye zimbini kuphela ngexesha. Ke ngoko, ithathwa njengohlobo olunokucothisa ukuzala.
Olu hlobo aludweliswanga njengomngcipheko kwi-International Union yoLondolozo lweNdalo (IUCN). Xa bekwiindawo ezikufutshane nabantu ngabona basemngciphekweni wokuloba notshintsho lwendalo ezinxulunyaniswa notshintsho lwendawo yokuhlala. Ukwakhiwa kwedama, ezolimo kunye nomzi mveliso kunokuba ziivenkile ezinkulu zempembelelo kuhlobo. Uhlengahlengiso lwendalo lwendalo inokuba sisizathu sokuba ookrebe babekwe emngciphekweni.
Ngokwesiko, ookrebe beenkomo balotywa ngenjongo yokuthengisa ulusu, inyama kunye neoyile yesibindi, nangona namhlanje, amanqaku e-IUCN, amaphiko abo yeyona nto iphambili kwimveliso yokuqhuba oku kunye nezinye iintlobo ezininzi.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukufunda ngakumbi ngezi krebe zithathwa njengezona zinobungozi ebantwini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Bull ukrebe
R. Ewe, ukuba uza kuthetha nge-bull shark, kutheni le mifanekiso mibini yokuqala ye-Galeocerdo cuvieri kunye ne-Carcharhinus plumbeus?
Andazi ukuba uyazi ukuba ifoto oyisebenzisileyo iyafana nepapashwe kuyo http://www.hablemosdepeces.com
Mhlawumbi yenye yeefoto zasimahla okanye bayikopa okanye uyithathile kuye. Ikwayinto eyenzekileyo ukuba nobabini nenze impazamo ekumpazamo ngengwe.
Inamaphiko amabini amakhulu emqolo
A. Ayinayo amaphiko amakhulu emqolo, i-seilfish iyakwenza oko.
Umbala wayo ungwevu emzimbeni wonke, ngaphandle kwenxalenye ephezulu emhlophe.
A. Akuyonyani, emazantsi amhlophe
Kuqwalaselwa phakathi kwezona ntlobo zinkulu zookrebe.
A. Akuyonyani, zinobungakanani obuqhelekileyo phakathi kookrebe.
Nangona abantu bekholelwa ukuba ukrebe omhlophe sesona silwanyana siyingozi elwandle, ayichanekanga. I-bark shark inokuba lula ngakumbi ekuhlaseleni abantu.
A. Akulunganga, zonke iintlobo ezingaphezu kwemitha ubude zinokuhlasela indoda kwaye zibangele ukonzakala okoyikekayo. Nangona kunjalo, zimbalwa kuphela ookrebe abakhulu abafanelwe ngokwenyani igama ngabantu abatya abantu. Malunga neentlobo ezingamashumi amathathu kuye kwagqitywa ngokuchanekileyo ukuba bahlasela umntu, kodwa zisithoba kuphela kuzo ezihlala zisitya. Ukrebe omkhulu onokulinganisa i-11,3 m. ubude, i-shorto-mako ebonisa ukuthanda ukwazi ngephenyane kunye nezinye izikhephe ezincinci ezihlaselayo, i-tiger shark ithathwa njengeyona inobungozi kakhulu emva kwe-whitefish. I-hammerhead shark kunye ne-blue shark attack ngaphandle kokuxhokonxa kwaye iyayitya le ndoda.
Ihlala ibonisa umsebenzi omkhulu wokuhlasela kunye nokuziphatha okuhlaselayo.
R. Germán, xa besithi: umsebenzi omkhulu woburhalarhume, kuninzi ukuziphatha okuhlaselayo, kuba ngamagama afanayo.
Ookrebe bafumaneka kuzo zonke iindawo eziselunxwemeni kwihlabathi liphela.
A. Akulunganga, kwiilwandle zeArctic nakwiAntarctic abazikhuphi iimpumlo zabo.
Inkunzi krebe itya zonke iintlobo zezilwanyana
A. Ayichanekanga, ayiboniswanga ukuba itya kwi-coelenterates, echinoderms, plankton, krill nezinye izilwanyana ezininzi.
Amanzi amatsha abangela ukuba iiseli zikakrebe ezihlala emanzini aselwandle ziqhume kwaye zikhokelele ekufeni.
R. Impazamo, kwezinye iintlanzi ziyafa ngenxa yokutshatyalaliswa kweeseli ezibomvu zegazi ngenxa ye-osmosis ebangelwa ngamanzi amatsha netyuwa.
Ukumitha kwabaselula kuhlala phakathi kweenyanga ezisi-8 ukuya kwezi-10.